Bot ity izay manoratra lahatsoratra Wiki - Semalt Expert
Mety hieritreritra ianao fa tsy tena misy ny lahatsoratra 15 000 ao anatin'ny andro iray, saingy mety ho an'ny Swed antsoina hoe Sverker Johansson. Ivan Konovalov, manam-pahaizana Semalt , dia nilaza fa nahavita namorona programa ordinatera afaka manoratra lahatsoratra an-tapitrisany io olona io. Nanoratra lahatsoratra maherin'ny 2.7 tapitrisa Wikipedia izy ary nahagaga ny asany tamin'ny asa goavana nataony. Araka ny voalazan'ny Wall Street Journal, i Johansson dia nanjary mpanoratra manerantany indrindra eran-tany, ary ny anjara biriny dia nahatonga ny lahatsoratra 8,5% amin'ny Wikipedia.
Ahoana no ahafahan'ny botsoratra manoratra lahatsoratra maro?
Milaza i Johansson fa afaka manoratra lahatsoratra an'arivony an'arivony ao amin'ny Wikipedia isan-andro ny bot. Mpampianatra siansa izy ary manana mari-pahaizana ambony amin'ny sehatra fianarana sivily, fiteny, ekonomika ary physika. Niteny tamin'ny Wall Street Journal i Johansson fa ny botany dia mamerina mamoaka ny vaovao avy amin'ny loharano azo itokisana ary mitambatra ny fitaovana. Matetika, ity rindrambaiko ity dia mirakitra lahatsoratra mifandraika amin'ny fiarovana ny biby madinika toy ny voangory sy ny lolo. Azonao atao ihany koa ny manoratra tantara momba ny tanàna kely sy vohitra Filipina.
Ny anaran'ny boton'i Johansson:
Ny voary Johansson dia antsoina hoe Lsjbot. Ity bot ity dia tsy voatery hanoratra lahatsoratra ho an'ny mason'ny olona..Ohatra, nanambara ny Associated Press fa hampiasa robots manokana izy hanoratra lahatsoratra an-jatony maro, ary tranonkala samihafa vaovao no mampiasa bots mba hanoratra lohahevitry ny vaovao isan'andro. Ny ankamaroany dia mirakitra ny tantara mifandraika amin'ny vola sy fanatanjahantena. Ao amin'ny Wikipedia, ny antsasaky ny lahatsoratra rehetra dia novolavola tamin'ny fanampian'ny bots. Ny sasany amin'ireo tonian-dahatsoratra ao amin'ny Wikipedia dia tsy faly satria tsy nisy olona nanoratra lahatsoratra samihafa. Na izany aza, Johansson miaro ilay bot ity ary manipika fa ny lahatsoratra nosoratany dia marina ary hatramin'ny marika.
Ohatra, i Lsjbot dia nanoratra lahatsoratra an-dalambe mikasika ny tanànan'i Basey, Philippines. Rehefa nahatratra an'io tanàna io ny rivo-doza Yolanda ary nahatonga fahafatesana, dia olona maro no afaka nitsidika ireo amboadia ary nanavotra olona marobe maro.
Ahoana no fomba i Lsjbot miasa?
Ireo lahatsoratra iray tapitrisa lsjbot nosoratana dia marina sy mahitsy. Ity bot ity dia manangona angona avy amin'ny loharano samihafa ary mametraka ny fampahalalana ao amin'ny format izay hifanaraka amin'i Wikipedia. Ny bot dia namorona lahatsoratra mihoatra ny 454 000 hatreto, ary ny antsasany dia amin'ny teny Soedoà. Ny vondrom-piarahamonin'ny Wikipedia Soedoà dia nianatra ny lesona avy amin'ny fifandirana samihafa momba ny famoronana ny botsika saingy liana ny hahalala bebe kokoa momba ny botan'i Johansson. Nandinika ireo lahatsoratra ny mpamoaka Wikipedia Swedish ary nilaza fa nanao asa tsara i Lsjbot. Na dia izany aza, tsy namela ity bot ity hanoratra lohahevitra mampiady hevitra izy satria ny Lsjbot dia tsy afaka nahatsapa ny zava-mekanika.
Ny tsikera momba ny botan'i Johansson:
Maro ny olona nanakiana ny botan'i Johansson, anisan'izany i Achim Raschka avy amin'ny fiteny alemana. Nitaraina momba ilay rafi-pitsarana izy ary nilaza fa tsy afaka nanoratra lahatsoratra lava i Lsjbot. Ity bot ity dia mampiasa ireo tahiry samihafa saingy mametraka loharanom-baovao tena izy ao ambadiky ny fanoratana zavatra. Ny ampahany amin'ny tsikera dia ny filazan'ny lahatsoratra rehetra dia tsy manohana andininy marina. Midika izany fa tokony hanampy betsaka ny Wikipedia i Lsjbot. Miaraka amin'io bot ity, lasa mora kokoa ny mamorona lahatsoratra marobe. Saingy mila mpanoratra sy mpanoratra manerantany ihany isika mba hanampy amin'ny fanazavana ireo zavatra ireo Source .